I-CAST-Isoftware yasimahla yohlalutyo lolwaphulo-mthetho- Geofumadas
I-CAST-Isoftware yasimahla yohlalutyo lolwaphulo-mthetho
NgoJulayi, 2015 Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
Ukufunyanwa kwimizekelo yendawo yolwaphulo-mthetho kunye nemigangatho yintloko yenzalo kunoma yimuphi uMbuso okanye urhulumente wengingqi.
I-CAST ligama lesoftware yasimahla, i-Initials ye-Crime Analytics ye-Space-Ixesha, eyathi yasungulwa ngo-2013 njengesisombululo esivulekile somthombo wohlalutyo lwe-actuarial, kunye neepatheni zendawo kunye nokuhamba kwe-algorithms kulawulo lweenkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho.
I-CAST sisicelo somthengi esenziwe kwiPython kunye neC ++ esebenza kwiWindos, iMac kunye neLinux, ephuhliswe kungabikho ngaphantsi kweZiko leGeoDA, eliye lavelisa usetyenziso olwahlukeneyo lokubala kunye nolwendawo. Eli ziko linelebhu eyasekwa nguMlawuli weSikolo seSayensi yeJografi kunye noCwangciso lweeDolophu kwiYunivesithi yaseIllinois.
Kwimeko ye-CAST, yonyuselwa ngembasa evela kwiZiko leSizwe lezoBulungisa nakwii-Ofisi zeNkqubo yezoBulungisa kwiSebe lezoBulungisa lase-United States. Indlela yokuphuhlisa ii-algorithms yasebenza kunye neYunivesithi yaseArizona State.
Isicelo sisekela iifayile ze-SHP, iziganeko eziqhelekileyo kwinqanaba lezinga kunye nohlalutyo lwendawo luvelisa umthamo ukusuka kumhla, apho iiplani zeepoloni zifunwa njengeendawo zokuhlala, izithintelo okanye izithili.
Njengoko iziphumo zingahlukana kwiigrafu, iimephu zeemathematika ezivela kumaphambuko, zikhupha imephu kunye neemephu zekhalenda.
Mhlawumbi eyona nto inomtsalane malunga nesicelo kukuba iza nemisebenzi ekhethekileyo esele ichaziwe kuhlalutyo lomkhwa kunye neenjongo zokunika ingxelo ngemicimbi. Umzekelo, umkhwa unokuqhelaniswa nokuwela idatha yabemi ukumela inani leziganeko ezinobundlobongela kumacandelo, umzekelo, imeko yenani lokusweleka kwabemi abangamawaka alikhulu. Emva koko ivumela ukuba kwenziwe uhlalutyo lwexeshana, ukumisela ngegrafu ukukhula, ukwehla kunye neemeko ezithile zokufunda kwinqanaba letheyibhile kunye nendawo. Ngokufanayo, ikhalenda yomntu inokuhlalutya phakathi kweentsuku ezithile, njengeziganeko kwieholide okanye ngeveki.
Kuya kufuneka udlale ngesixhobo, kuba unokuvelisa iimephu zoopopayi kwisikali sexesha, apho kunokwenzeka khona ukuba umisele indawo yolwaphulo-mthetho ukuba iya kusasazeka ukuba imeko iyaqhubeka. Ewe kunjalo, kufanele ukuba kunomdla ukufaka idatha entsha kumanyathelo okhuseleko athathiweyo, ukubona ifuthe elinalo. Into eluncedo kakhulu kwiindawo ezisezidolophini ezinomxholo wangoku wempembelelo yolwaphulo-mthetho oluhleliweyo kunye neqela lemigulukudu elinokuthi ngokuqinisekileyo libonwe njengeekhonkrithi ezidibeneyo. Kwaye ukusukela ukuba le nkqubo yenzelwe le njongo, iyaqhelana neemodeli zolawulo lokhuseleko kunye nokuthintela ubundlobongela, njengokulawulwa kwee-quadrants, amacandelo okanye izithili.
Ukuqukumbela, isicelo esibalulekileyo. Enye enye phantsi komzekelo ovulekileyo wemithombo, apho sinqwenela abaxhasi abangasasazekiyo, ngaphandle kokuthathela ingqalelo oorhulumente abatyala imali kukhuseleko ngokungasebenzi ngokukuko.
CAST ingalayishwa ukusuka esi sixhobo. Naye ngokunjalo incwadi yomsebenzisi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Itekhnoloji yeNdlela yeTekhnoloji eSpain kunye nezoBunjineli boLuntu e-China kwiminyaka nje eyi-4
Post Next Ukuma komhlaba ngokwesiko vrs. LiDAR. Ukuchaneka, ixesha kunye neendleko.Okulandelayo »
Iimpendulo ze-3 kwi "CAST-Isoftware yasimahla yohlalutyo lolwaphulo-mthetho"
ULuis Diaz uthi:
Akhona eXcellent la manyathelo isicelo izibalo isenzeko mthetho, GVSIG nakho kwakudala isisombululo njengangoku tirhisiwaka Castellón Spain ekuthiwa GVSIG Ulwaphulo-mthetho, ukuba nabani na ukufunda eli nqaku uyazi naliphi na elinye inyathelo lokuqala le ntsimi kakhulu ukusetyenziswa kakhulu leyo iphandwayo kule ndawo. Ukuze siliphathe yangasemva kule hlobo phando.
Zama esi sixhobo
Kubonakala ngathi ikhonkco yokukhuphela ihla, ayiyi kutholakala kuluntu okwamanje?